Hagaha ugu fiican ee blackjack iyo xeeladaha - Gambling Papa
1 Waa maxay blackjack?
1.1 Taariikh kooban oo ku saabsan ciyaarta kaararka saamiyada badan leh ee adduunka ugu caansan
1.2 Shuruudaha Xirfadda si aad u noqotid ciyaaryahan weyn oo blackjack ah
2 Sida loo ciyaaro blackjack?
2.1 Astaamaha aasaasiga ah ee blackjack
2.2 Maxay ku qaadataa in si joogto ah loogu guuleysto?
3 Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadda blackjack?
3.1 Tilmaamaha istaraatiijiga ee lambar ahaan laga soo qaatay
3.2 wuxuu hubiyaa qofkasta inuu ciyaari karo isagoon uumi bixin
4 Tilmaamaha Blackjack ee bilowga
4.1 Waxyaabaha muhiimka ah ee qaawan
4.2 Fiiro gaar ah u yeelo gacanta ganacsadaha
5 Xeeladaha sharadka ee Blackjack
5.1 Dhowr habab oo caan ah oo loogu talagalay bilowga
6 Waa maxay tirinta kaararka ee blackjack?
6.1 Farsamo loogu talagalay in lagu hagaajiyo cidhifka guriga markaad khamaarayso
6.2 Dhowr hab ayaa loo isticmaalay in lagu sii xoojiyo ujeedooyinkan
Markaan sii weynaano, waxyaabaha aan ku raaxeysano waqtigeena firaaqada ah waxay umuuqdeen inay isbadaleen. Si kastaba ha noqotee, dhamaadka maalinta, iyadoon loo eegin waxyaabaha gaarka ah, waa isla dareen hore.
Marka, Ma maqashay dhowr saaxiibadaa oo ka hadlaya habeen xiiso badan oo miiska fadhiya? Waxay umuuqataa in midkood xitaa uu guriga la yimid qadar lacag ah. Hadda, waxaad bilaabeysaa inaad ka fekerto in Blackjack ay noqon karto dabagal qiimo leh.
Iyada oo ku xidhan hadba cidda aad weydiiso, waxaad heli kartaa hal milyan oo jawaabo kala duwan
Dabcan, sawirka runta ah had iyo jeer wuu ka dhib badan yahay ereyo yar oo cabbir leh oo shaashadda waligood gudbin kara. Si kastaba ha noqotee, saddexda cutub ee soo socda, waxaan sameyn doonaa isku day xoog leh.
Waa maxay blackjack?
Marka ugu horeysa, aasaaska taariikhiga ah ee kaarkaan cajiibka ah ayaa muhiim ah. Si aad si buuxda ugu qanciso dhererkeeda muuqaalka leh, qofku waa inuu had iyo jeer fiiriyaa asalka. In kasta oo ay weligeedba noo ahayd, haddana waa ikhtiraac casri ah oo ku jirta qorshaha weyn ee waxyaabaha.
Taariikh kooban oo ku saabsan ciyaarta kaararka saamiyada badan leh ee adduunka ugu caansan
Marka loo eego sida ugu fiican ee aqoonteenna ah, waxay umuuqataa in ciyaarta ay bilaabatay inay kasoo ifbaxdo waqooyi-galbeed Yurub. Intii lagu jiray Da’da iftiiminta, qaabab badan oo madadaalo ah ayaa la helay. Marka hore, waxay kaliya u ekaatay qaabkeeda casriga ah. Waxay ahayd sanado badan oo keliya inay ugu dambayn qaadatay qaab aan maanta aqoonsan nahay.
Ka horreeyay ciyaartii kaararka Ingiriisiga, 21:
Rikoorradii ugu horreeyay ee aan ka haysanno ciyaarta waxaa laga soo qaatay qarniyadii dhexe ee Ingiriiska. Guud ahaan, waxaa loo maleynayaa in 1700-yadii, ciyaarta kaararka caanka ah, 21, ay caan ku ahayd dadka oo dhan.
Markii ugu horreysay wuxuu u muuqday qaabkiisa casriga ah meel ka mid ah Faransiiska intii lagu jiray 1760-meeyadii:
Halkaas, cayaartu waxay ka gudubtay kanaalka waxaana laga soo dejiyay baadiyaha Faransiiska. Markii ay dad badani bilaabeen inay ciyaaraan, sharciyada ayaa weligood waxyar laga beddelay. Sannado badan oo hawshan ah awgeed, waxaan fadhiisan karnaa miis si aan ugu ciyaarno gacanta Blackjack.
Shuruudaha Xirfadda si aad u noqotid ciyaaryahan weyn oo blackjack ah
Hadda, waxaan ku dhammeynay sheekooyin taariikhi ah. Waa wakhti aad ku degto xirmooyinka naxaasta ah. Hadaad jeceshahay inaad noqoto ciyaaryahan dhab ah, waxaan kugula talin lahayn inaad diirada saarto sifooyinka soo socda. Adiga oo horumariyo iyaga, waxaad si fiican ugu diyaar garoobi doontaa xaalad kasta marka saamaladu run noqdaan.
Samir: Dulqaad: Intaas oo dhan, sida inta badan kulamada nasiibka, Blackjack waa ciyaar karti. Kuwa ka buuqsan culeyska fekerka, socodka habeenka dhamaadka iyagoo wata jeebado dahab lagu shubay ayaa aad ugu dhowdhow.
Fikirka falanqaynta: Waxaad ku ciyaari kartaa gacmo jilitaan ah kumbuyuutarkaaga weligiis. Si kastaba ha noqotee, mar alla markii aad fariisato casino tooska ah lagu noolaado , waxaad iloobi doontaa inta badan wixii aad baratay. Sidaa darteed, ka fikirka duulimaadku waa tayada lama huraanka ah ee ciyaaryahanka xirfadda leh.
Way ku caawin doontaa haddii aad ku wanaagsan tahay tirooyinka: Ka sokow, xisaabtu waa mid waxtar leh iyo meelo badan oo kale oo nolosha ah sidoo kale. Markaad barato xirfadaha xisaabta oo fiican, waxaad ka faa’iideysan doontaa miiska iyo meelo badan oo kale sidoo kale.
Sida loo ciyaaro blackjack?
Waqtigan xaadirka ah, waxaan tuhunsan nahay inaad u badan tahay inaad u dhimaneyso inaad barato sida loo ciyaaro ciyaarta. Uguyaraan, waxaan noqon doonnaa kadib markaan maqalno wixii aan ilaa hadda kuu sheegnay. Sidaa darteed, waxaan go’aansanay inay tahay waqtigii aan ka noqon lahayn. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan ka gudbin aasaasiga, waxaan jeclaan lahayn inaan kuu soo saarno qoraal taxaddar leh. Kaliya waa naxariis.
Kahor intaadan bilaabin:
Isku diyaari suurtagalnimada Khasaare: Xitaa ciyaartoyda ugu fiican waxay lahaan karaan habeen xun. Haddii aanad waligaa khamaarin ka hor, markaa ha ku dhex gelin khamaarka wax ka badan intaad awoodi karto inaad lumiso. Haddii kale, waxaad codsaneysaa waqti xun oo aan loo baahnayn inuu dhaco.
Marna ha u maleynin inay dhamaatay inta kaararka oo dhan la ciyaarayo: Si fudud haddii loo dhigo, naftaada oo aad iska baxdo had iyo jeer waxay noqon doontaa cadawga kuugu weyn ee kaa soo horjeedda. Marka khilaafku u ekaado inuu adiga kugu qumman yahay, markaa waa inaad ilaalisaa anshaxa oo aad xoogga saartid buuqa. Haddii aad guuleysato, waxaad u soo bixi doontaa guul markii ugu dambaystii siigadu degto.
Astaamaha aasaasiga ah ee blackjack
Si aan u bilawno, waxaan dul mari doonnaa dhinacyada ugu muhiimsan ee ciyaartan. Markaad barato iyaga, macluumaadka hoosta ku qoran ee hagaha ayaa kuu sahlanaan doona inaad fahamto. Xitaa haddii aad tan ka hor maqashay, cusbooneysiin deg deg ah ayaa fiican haddii aad dhab ka tahay inaad ku ciyaarto sida ugu fiican.
ereyo muhiim ah iyo fikrado muhiim ah
sagxadda: Kani waa magaca loogu talagalay xargaha weyn ee uu adeegsaday ganacsadaha markii ugu horreysay ee gacantaada la saaro miiska. Kasiinooyinka badankood ama casinos online , sagxadda waxay ka kooban yihiin lix caadi 52 kaararka turkiga.
Hadafka Aasaasiga ah: Ciyaartan, waxaa jira laba dariiqo oo aad adigu ku guuleysan karto, guud ahaan hadalladii. Waqtiga intiisa badan, waxaad u baahan doontaa inaad ujeeddo ka dhigto wajiga ugu dambeeya ee 21 gacantaada ah. Haddii aad si sax ah u garaaci karto, waxaad ku guuleysan doontaa 1.5 jeer qadarka sharadkaaga. Haddii aad degto 21 sano ka yar, si toos ah uma waayi doontid. Ka soo qaad in ganacsaduhu uu ciyaarta ku dhammeeyo dhibco ka sarreysa 21. Xaaladdaas, markaa waad ku guuleysan lahayd asal ahaan. Dabcan, marka gacantaadu dhibco ka sarreyso 21, markaa adiguba si toos ah ayaad u lumineysaa sidoo kale.
Qiyamka kaararka: Mararka qaarkood, xeerarku way ku kala duwanaan doonaan hadba meeshii ay u kala baxayaan. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, waxaad ku kalsoonaan kartaa qiyamka soo socda si aad u ahaato mid joogto ah. Kaadhadhka laga bilaabo 2-10, waxaad si fudud u isticmaali kartaa qiimahooda wejiga. Xaaladaha badankood, dhammaan boqornimada, waxaad u xilsaari kartaa qiime dhan 10.
Marka la eego ‘ace’ marka loo eego, sharciyada way ku kala duwan yihiin aasaaska: Mararka qaarkood, waxaa loo tiriyaa inay yihiin 11. Mararka kale, dadku waxay ku tirin doonaan inay yihiin 1. Xitaa waxaa jira miisas qaar kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto Aces “duurjoogta. ” Sidaas awgeed, adiga oo ku siinaya fursad aad ku go’aansato labada midkood doorbididda gacantaada.
Maxay ku qaadataa in si joogto ah loogu guuleysto?
Sida had iyo jeer ah, gurigu wuxuu leeyahay faa iido inta badan xaaladaha. Sidaa darteed, isku celcelis ahaan, waxaad filan kartaa ciyaartoydu inay ku baxaan wax ka yar wixii ay la yimaadeen bilawga habeenka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar miiska la fadhiya qoorta aan la garan karin si ay ula socdaan faa’iido. Dadkaas, waa maxay waxa isbeddelka noocaas ah keena? Guud ahaan marka laga hadlayo, waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa istiraatiijiyad yar. Waxaa intaa dheer, modicum yar oo anshax xumo ah haba yaraatee mid xun
Sida hiwaayadaha ugu badan, waayo-aragnimada farshaxan yaqaan ee xirfaddiisa ayaa ah garqaade, oo leh gar-qaadasho dil ah. Waa muujinta xoog kala soocaya kuwa kaliya sheeganaaya awooda iyo kuwa iyagu wata.
Dabcan, si fudud inaad waqti badan ku qaadatid qamaarka ma hubineyso inaad noqon doonto ciyaartoy xariif ah. Si kastaba ha noqotee, adigoon wakhti wakhti wax ku baran, waxaad hubaal ka dhigi kartaa in suurtagalnimadu aysan waligeed jirin meesha ugu horeysa.
Wadada loogu tababarayo asluubta:
Ka sokow, haddii aad jeclaan lahayd inaad noqoto xirfadle, waa inaad u tababbarto sida mid uun. Tag eeg qaar ka mid ah wareegyada pro ee telefishanka. Miyaad dareentaa wax gaar ah oo dhammaan ciyaartoydu u muuqdaan inay wadaagaan? Marka laga eego aragtideena, waxay umuuqataa sidii inay sii ahaan karaan kuwo diiradda saaraya xitaa haddii ay jiraan cadaadis aad u weyn. Adigu ma horumarisid adkaysiga noocaas ah adiga oo aan gelin wax dadaal ah bilowga. Waxaan kaliya aragnaa natiijooyinka kama dambaysta ah, in kasta oo inta badan, ay qaadatay sannado tababar ah horumarinta.
Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadda blackjack?
Waqtigan xaadirka ah, waxaad diyaar u tahay inaad suulashaada dhex gasho aasaaska istiraatiijiyadda blackjack. Waqti kasta oo aad ku dhex gasho casino, Fiiri hareerahaaga. Waxaan kuu balan qaadeynaa inaad arki doontid dhowr shax oo dul sabeynaya macaamiisha. Markaad aragto kuwaas, waad ula socon kartaa miiska blackjack. Dhab ahaantii xaaladaha oo dhan, marka aad jaleecdo iyaga ka mid ah, waxay noqon doontaa shaxda istiraatiijiyadda blackjack.
Tilmaamaha istaraatiijiga ee lambar ahaan laga soo qaatay
Si loo caddeeyo, jaantusyadan, waxaad heshay go’aan-qaadasho deg-deg ah. Xitaa duruufaha ugu adag, ma aha wax adag in la xasuusto tallaabada saxda ah.
Ka soo qaad in aadan weligaa arkin iskudhafka kaararka oo jiifa miiska hortaada. Kaliya soo qaado shaxdan. Kadib, fiiri tallaabada saxda ah. Maaddaama dhaqdhaqaaqyadani ay ka soo jeedaan xisaab ahaan, qaddiyadaadu had iyo jeer way fiicnaan doontaa sida ugu macquulsan adoo adeegsanaya qaabkan.
La xaqiijiyay inuu soo saaro natiijooyinka ugu wanaagsan celcelis ahaan:
Dabcan, xitaa haddii aad raacdid mid ka mid ah kuwan warqadda, ma xaqiijineyso natiijo faa’iido u leh gacan kasta. Waxay si fudud kor ugu qaadeysaa suurtagalnimada inaad ku qanacsan tahay sida wax u ciyaaraan. Marka, adoo adeegsanaya habeenkii oo dhan, waad iskaga tegi doontaa adiga oo faraxsan marka loo eego celcelis ahaan.
wuxuu hubiyaa qofkasta inuu ciyaari karo isagoon uumi bixin
Sida ugu xiisaha badan sida casinos-ka yihiin, waxaan had iyo jeer soo saarnaa erey digniin ah oo ku saabsan booqdayaasha ugu horreeya. Kahor intaysan gaarin albaabbada hore, waa inay xoogaa waxbartaan.
Haddii kale, way u fududahay iyaga inay ku dhacaan riyood iyagoo aan xitaa ogaanin inay wax xun yihiin. Markaa, way fududaan doontaa jilayaasha aan damiirka lahayn inay ku cadaadiyaan khaladaad aan loo baahnayn inta ay miiska joogaan.
Iyada oo kuxiran duruufahaaga, waxaad baari kartaa tallaabada ugu habboon ee booskaaga:
Si aad iskaga hubiso waxyaabahaas oo kale, cilmi-baaris badan oo aad sameyso, ayaa ka sii fiican. Aqoon ahaan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fudud u uriso qof kasta oo doonaya inuu kaa faa’iideysto markii aad sagxadda joogtid. Si fudud u dhegeyso mindhicirkaaga. Waqtiga intiisa badan, waxay kuu sheegi doontaa sida wax walboo caqli gal ah ugu socdaan.
Haddii aad akhrin karto jaantus, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah kuwan:
Ka sokow, mid ka mid ah jaantusyadan, waxaad had iyo jeer dareemi doontaa raaxo. Ka soo qaad inaad cabto dhowr martinis ka dib markii aad ku guuleysatay gacan. Xitaa qof wax yar tilmaamayaa wuxuu ku aqrin karaa mid ka mid ah jaantusyadan kuwan. Uguyaraan, qof walba oo aan qaadanay casino wuxuu awood u yeeshay inuu sifiican ula qabsado midkood. Isku mid ayaa loo sheegi karaa dhammaan asxaabtooda sidoo kale.
Tilmaamaha Blackjack ee bilowga
Marka, aan dhahno waxaad ku dhex martay wadada dheer ee loo maro ‘Pantheon’ oo ah albaabka hore ee casino. Maskax noocee ah ayaad keentaa inaad diirada saarto marka ay tahay inaad la kulanto xilligan? Adiga oo maskaxdaada ka debcinaya waxyaalaha hoos u dhaca ee walwalka, maskaxda maskaxda ayaa si dabiici ah u kobcisa. Waxaas oo dhami waxay kugu dhex jiraan sidii xoog qarsoon.
Si kastaba ha noqotee, istiraatiijiyad sax ah, waligaa ma dareemi doontid sida jilbahaagu u dhididsan yihiin.
Halkii aad ka daali laheyd, oo qaboobi laheyd, isla markaana aad ugu jawaabi laheyd caqabad muuqata, waxaad noqon doontaa lacag laawe ku soo rogmada Danube.
Haddii kale, sidee kale ayaa loo sharixi karaa kalsoonida noocaas ah iyo jabsashada?
Caadi ahaan, noocan oo kale ahi wuxuu ka yimaadaa oo keliya kuwa jeebkooda ay ku raran yihiin khasnado, kuwaas oo la ururshay daqiiqad uun ka dib.
Haddii taasi ay tahay wax adiga kuu muuqda oo aad ku qanacsan tahay, markaa waxaan helnay war weyn.
Liistada soo socota ee waxyaabaha muhiimka ah, waxaan ku soo koobnay fikradaha aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah in lagu daro faallooyin kooban koontadaada bangiga. Dabcan, natiijooyinka qof walba wuu kala duwanaan doonaa. Maaddaama Blackjack ay tahay ciyaar nasiib, xitaa xirfadlayaalku waxay kaliya ka sarreyn karaan guriga illaa heerkaas oo kale ah.
Wixii intaa dhaafsiisan, maaraynta halista ayaa ah qeyb kamid ah istiraatiijiyadda nooc kasta oo kaararka tirinta ah.
Waxyaabaha muhiimka ah ee qaawan
Haddii aad daqiiqado kali ah haysatid si aad isugu diyaariso, maxaad ubaahantahay inaad barato kahor intaadan usocon garoon gladiatorial? Naftaada geli kabaha nin xaaladaas ku nool adoo akhrinaya liistada soo socota ee xeeladaha kooban.
Haddii gacantaadu hada fadhido inta udhaxeysa 12-16 halka ganacsadaha uu muujinayo inta udhaxeysa 2-6, markaa waa inaad istaagtaa:
Markii lagu siiyo ikhtiyaarka, istaaggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gacantaada ku hayso ciyaarta adigoon lacag dul dhigin khadka. Haddii aad jeclaan lahayd inaad cadaadis saarto ganacsadaha oo aad aragto sida wax u socdaan, tani waxay noqon doontaa xulashada ugu fiican xilliyada badankood. Dabcan, marka daqiiqadda saxda ah ay timaaddo, si aad si dhab ah u weyneyso khilaafkaaga, tixgeli inaad labalaabto halkii aad joogi lahayd. Haddii ay dhacdo inaad wicitaan sax ah sameyso, guriga ayaad ku lugeyn doontaa iyadoo dakhli macaan laga helayo, dhammaantoodna laga helayo hal go’aan oo waqtigiisa ku habboon
Haddii aad haysato inta u dhexeysa 12-16 halka ganacsadaha uu muujinayo 7 ama wixii ka sarreeya, markaa waa inaad garaacdaa: Caadi ahaan, tani waa halka ay dadku ka bilaabaan inay dareemaan cadaadiska. In ka badan kala badh kaararka la jiido waxay kugu sababi doonaan inaad dhaafto 21. Sida iska cad, dadka badankood waxay dareemayaan inay madaxa wax yar ka jiraan haddii ay arkaan inay indhaha ku hayaan khilaafaadkaas. Si kastaba ha noqotee, maadaama aad lumineyso sharadka iyada oo aan loo eegin, u oggolaanshaha ganacsadaha inuu tijaabiyo caqabadaha waxay noqon kartaa bilawga soo noqoshada, isla xilligan ugu dambeeya.
Markaad haysatid labo aces ama 8s, markaa waa inaad kala qaybisaa:
Rumayso ama ha rumaysan, waxyaabaha sida ah in ay dhaceen wax badan oo ka badan inta qofku ka shakisan yahay, marka lagu qiimeeyo filimada. Si kastaba ha noqotee, rookies badan ayaa iska saaraya ciyaarta ka hor inta ganacsade xitaa uusan helin fursad uu isku toogto cagta. Haddii kaliya aad ku dhegan tahay rajadii ugu dambeysay ee rajada dhowr ilbiriqsiyo ka dib, markaa waxaad ku riyoon lahayd wax ka duwan . Markaad shaki gasho, iskuday inaad xajiso. Ilaa intaad wax kale khadka saarin, waxaad sidoo kale siin kartaa wax kasta oo aad haysato. Ayaa garanaya waxa dhici kara ugu dambayn?
Laba jeer hoos u laabo 11 marka ka dib ganacsadaha uu muujiyo 2-10: Hadda, waxaan soo galeynaa dhowr ka mid ah hababka horumarsan ee liiska. Ka dib markaad si fiican u baratay kuwa kor ku xusan, waa inaad bilowdaa inaad uruuriso keyd yar oo ka mid ah jaangooyooyin casri ah oo casri ah. Ilaa iyo intaadan qarash gareeye aheyn, waqti dheer kuma qaadaneyso inaad xoogaa kamid ah ku soo jiidato gacantaada markii aad xanaaqdo. Si aad si dhab ah ugu kaydiso keyd hantiyeed, waa inaad ku guuleysataa xirfaddan farshaxanka laba-geesoodka ah. Iyada oo sharad wakhti fiican leh, waxaad labanlaabmi doontaa dakhligaaga adigoon qaadan wax khasaaro ah oo dheeri ah. Dabcan, ma garaaci kartid guriga gacan kasta. Weli, tirakoob ayaa loo heli karaa qof kasta oo uu ku ciyaari karo.
Garaac marka gacantaadu 6 ama ka hooseyso: Inta ugu fudud oo dhan, haddii gacantaadu ka yar tahay lix, weydii ganacsadaha kaar kale. Marka gacantaadu sidaa u hooseyso, waxna kuuma keenayaan inaad buste noqoto. Kaliya hal su’aal, gacantaadu ma leedahay labo nooc oo ka mid ah maxaa yeelay, haddii ay sidaas tahay, markaa waxaad u kala qaybin kartaa laba gacmood oo kala duwan oo suurtagal ah. Hadal ahaan digniin ahaan, haddii aad u kala qaybin lahayd kaararka sidii tusaaladii hore, markaa waxay u baahan tahay sharad dheeri ah oo lagu dhejiyo miiska.
Fiiro gaar ah u yeelo gacanta ganacsadaha
Dhamaan tusaalooyinkii hore, diirada koowaad waxay ahayd waxa gacantaadu ku jirtay. Kuwa doonaya inay si dhab ah u bartaan Blackjack, waxay u baahan doontaa wax yar oo ka sii adag. Haddii kale, waad ka fiicnaan doontaa celceliska Joe kaasoo waligiis ku ciyaaray Blackjack elektaroonig ah taleefannadooda casriga ah.
Xeeladaha sharadka ee Blackjack
Laga yaabee, inay si fudud markhaati u tahay waqtiga. Si kastaba ha noqotee, way adagtahay in la iska indhatiro natiijooyinka muuqda ee anshaxa shaqada birta ah.
Xusuusnow, haddii ay dhacaan, gacmahaagu qiime ma laha:
Ilaa iyo inta aad ka baraneyso dhinac walba, gaaritaanka dherer u dhigma kuwa halyeeyada ayaa ah mid aad uga macquulsan inta badan dadka doonaya inay qirtaan.
Dhowr habab oo caan ah oo loogu talagalay bilowga
Hase yeeshee, horyaallada xirfadleyda xirfadleyda ah waxay ka soo jeedaan horyaal gebi ahaanba ka duwan kuwii laga jaray dharkaas.
Mararka qaar, si loo guuleysto, way fududahay in lagu qasbo inay ciyaarta ka baxaan:
Adoo si fiican u jaan goynaya bixidaada, waad sii joogi doontaa inta ugu badan ee suurtogalka ah si ganacsatada loo siiyo waqti badan oo ay isku qarxiyaan.
Xeelado dhowr ah oo aasaasi ah oo aad ku baran karto
tirinta kaarka aasaasiga ah
Jaantusyada kaararka istiraatiijiga ah
Hail Maryan ayaa ku soo dhowaatay
Waa maxay tirinta kaararka ee blackjack?
Tan iyo markii sawirada tirinta kaararka ay noqotay mid caan ah, malaayiin shaqsiyaad xiiso leh ayaa bilaabay inay weydiiyaan su’aal.
Aragti ahaan, waa fikrad toosan oo toos ah. Waxay unaba dhacdaa inay ku yeelato saameyn kacaan ah gacmaha xisaabiyeyaal xeel dheer.
Farsamo loogu talagalay in lagu hagaajiyo cidhifka guriga markaad khamaarayso
Mabda ‘ahaan, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad abuurto nidaam lambar oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ula socoto inta jeer ee kaararka lagu ciyaarayay. Iyadoo la raacayo, xeelad kasta oo keenta fursad guul waa inay u oggolaataa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u soo uruuriyaan dhaq-dhaqaaqyada aaladaha mnemonic. Inta badan, waa kaliya xusuusteenna liidata sida aadanaha oo ka hortageysa tirinta kaararka in loo adeegsado waxtar badan malaayiin kale.
Dhowr hab ayaa loo isticmaalay in lagu sii xoojiyo ujeedooyinkan
Habka “+1, 0, -1”:
Waxay kuxirantahay cida aad weydiisato, waxaa lagu siin doonaa dhawr jawaabo oo kaladuwan Kuwaas oo kaararka la siiyay madaahibta gaarka ah. Iyadoo aan loo eegin, mabaadi’da ayaa isku mid ah xaalad kasta.
Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaad qaadan doontaa qaar ka mid ah kaararka.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad doorataa kaararka leh qiyamka wajiga oo kayar 7. Markaa, waxaad u qoondeyn lahayd magaca -1. Iyadoo la raacayo isla habka, loo qoondeeyey qiimaha eber kaararka ayaa ah qiimaha wejiga u dhexeeya toddobada iyo 10. Ugu dambeyntiina, ku dar hal qiime oo dhammaan kaararka haray ah.
Intaas ka dib, markay kaararka bilaabayaan inay hoos ugu duulaan miiska, la soco wadarta guud ee madaxaaga.
Markasta oo kaar kasta oo ku xiga uu kudhaco miiska dushiisa, ku dar qiimaha loo qoondeeyay wadarta dhamaan lacagihii hore.
Waxaad ogaan doontaa inay tahay waqtigii aad dhaqaaqi lahayd markii aad haysato lambar wareegsan oo isku ekeysiinaya wadarta guud. Ha ahaato mid togan ama taban, xilligaas, waxay ka dhigan tahay dabaqado ku saabsan jug.
Maaddaama wax walba ay u siman yihiin nolosha, dhammaadka maalinta, waxaad arki doontaa xoogaa cillado tirakoob maaddaama isu-dheellitirnaanta dib loogu soo celiyo xayndaabka. Marka dheelitirka la soo celiyo, waxaad heli doontaa daqiiqado yar oo aad neefsato.
Kalimad kama dambeys ah oo digniin ah, xusuusnow tani waa qeybta ugu halista badan habeenkii ee bilowga badankood. Ka dib markaad la kulantid aragti ah guusha, barashada goorta aad ku riixeyso bareegyada waxyar waa muhiim. Xakamayn la’aan, shidaalku wuu kaa dhacayaa. Xitaa way dhici kartaa kahor tirinta xigta xitaa waxay ka bilaabanaysaa furaha.